sampana Archives - FJKM Amparibe Famonjena
Catégorie : sampana
Sampana Vokovoko Manga – febroary 2020
« Ary mitandrema fandrao ny fonareo hovesaran’ny vokatry ny fisotroan-toaka sy ny fahamamoana ary ny fiahiahian’izao fiainana izao ».
Ny Sampana vokovoko manga dia sampana velona sy miasa eto anivon’ny Fiangonana FJKM Amparibe Famonjena nanomboka ny taona 1991. Ny antom-pisiany dia mitaiza sy manampy ny olona hifady ny zava- mahamamo sy ny zava-mahadomelina, izay hitantsika fa mahazo vahana amin’izao andro ankehitriny izao, ary tsy mifidy sokajin-taona intsony izany fa maha-henika ny olona rehetra na lahy, na vavy, na ankizy, na olon-dehibe. Ny antom-pisiany koa dia maneho @kristiana rehetra fa tempolin’Atra ny tenany ka tokony harovana araka ny teny fanevan’ny sampana manao hoe: “Tsy fantatrareo va fa tempolin’Atra ianareo, ary ny fanahin’Atra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin’Andriamanitra dia mba hosimban’Atra kosa izy, fa masina ny tempolin’Andriamanitra , dia ianareo izany” (IKor 3:16-17). Izany no antony hitaizana ny mpianakavin’ny finoana ny @tokony hisotroana ny ranomboankazo mahasalama izay tanterahinay eto @fiangonana isaky ny alahady fandraisana, izay isaoranay antsika rehetra mandray izany sy manohana ny asan’ny sampana.
Noho izany marihina fa mifady ny zavamahamamo sy mahadomelina ny mpikambana ao amin’ ny SVM fa tsy miady amin’ny olona mbola mandray ireo ary izy ireny indrindra no entanina hiditra ato anatin’ ny sampana.
Sary 2 : sarin’ny mpikambana alahadim-bokatra jona 2019
Toy izao ny rafitra misy ny taom-piasana 2020-2024:
Misy ny Komity miisa 10 ary eo koa ny Rantsana Fanantenana izay mitaiza ny ankizy sy ny tanora hifady ny zavamahamamo sy ny zavamahadomelina.